ကော်ဖီလား? ဘီယာလား? ဘော်ဒါတို့ – Miracle Times
Super Sunday ကို ပြန်ရောက်လာပြီနော် ဘော်ဒါတို့။ ထုံးစံအတိုင်း အေးအေးဆေးဆေး Chill ပြီး အနားယူရမယ့် ရက်လေးတစ်ရက်ပေါ့။ ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ တနင်္ဂနွေရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်လေးတွေကို စိတ်ကိုလန်းရွှင်စေမယ့် အဖျော်ယမကာလေးတစ်ခုနဲ့ ဖြတ်သန်းကြရအောင်ဗျာ။
ကျွန်တော်တို့ အကြိုက်ဆုံးအနှစ်သက်ဆုံးတွေကိုပဲ စဉ်းစားကြည့်ကြမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ သေချာတယ်၊ ကော်ဖီ ဒါမှမဟုတ် ဘီယာပေါ့။
ကော်ဖီဆိုတာ မနက်စာ၊ ဘီယာဆိုတာ ညစာလို့ ဘော်ဒါတို့တွေးကောင်းတွေးနေမိနိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် Sunday အတွက် အကောင်းဆုံး Super Drink တစ်ခုကို ဒီထဲက တစ်မျိုးပဲ ရွေးချယ်ပြီး ဇိမ်ခံကြရတော့မယ်ဆိုပါတော့။ ဘာကို ရွေးချယ်ကြမလဲ။ တွေးရခက်လှတယ်နော်။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒီတော့ ရွေးရလွယ်အောင် လမ်းညွှန်ချက်လေးတွေပြောပေးပါမယ်ဗျာ
Energy – ကော်ဖီမှာပါဝင်တဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ကို သင့်ကိုတက်ကြွစေတယ်၊ ခွန်အားပြည့်စေတယ်။ ဒါကြောင့် ကော်ဖီသောက်တဲ့အခါ တက်ကြွလန်းဆန်းနေတတ်တာပါ။
အသိုင်းအဝိုင်း – ဟိုးရှေးပဝေသနီကတည်းက လက်ခံထားကြတာက ကော်ဖီသောက်ခြင်းဟာ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို တိုးတက်စေတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုပါတဲ့။ ကော်ဖီဝိုင်းတွေဟာ ပြင်ပလူနေမှုဘဝရဲ့ Social Network တွေပဲလေ။ ဒါကြောင့်လည်း ကော်ဖီတစ်ခွက်က ခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ နှစ်လိုသဘောကျမှုတွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အမြဲပါဝင်နေတတ်တာပေါ့။
ရင်းနှီးမှု – အသိုင်းအဝိုင်းတွေဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့အတူ ကော်ဖီသောက်ခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းက လူအချင်းချင်းအကြားမှာ ရင်းနှီးမှု တွယ်တာမြတ်နိုးမှုတွေကိုလည်း ဖန်တီးပေးပါတယ်။
ကျန်းမာရေး – သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာချက်တွေအရ ကော်ဖီသောက်တာဟာ အမျိုးအစား-၂ ဆီးချို၊ နှလုံးရောဂါ၊ အသည်း၊ လေဖြတ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုနဲ့ ကင်ဆာရောဂါတစ်ချို့ကို သက်သာစေသလို မဖြစ်ပေါ်အောင်လည်း တားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်အလေးချိန် – ကော်ဖီသောက်လို့ရတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေထဲမှာ ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေတယ် ဆိုတဲ့အချက်လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သကြားတွေ၊ နို့ဆီတွေ နိုင်းခြင်းနဲ့ ထည့်သောက်နေရင်တော့ ပြောင်းပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသာ ဖြစ်စေမှာပါနော်။ နောက်ပြီး တစ်နေ့ကို ၄ ခွက်ထက်ပိုပြီး သောက်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေသာ ဖြစ်စေမှာပါ။
အသက်ရှည် – သင်အံ့ဩသွားစေမယ့်အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘီယာသောက်သုံးသူတွေဟာ သာမန်ထက် အသက်ပိုရှည်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ သင့်လျော်ရုံ၊ ပျော်ရရုံ၊ စကားပြောကောင်းရုံလောက်ပဲ ဆိုတာကို သိထားဖို့ လိုပါတယ်နော်။ ဒါပေမယ့် နေ့စဉ်ရက်ဆက် နွားငတ်ရေကျသောက်ရင်တော့ အသက်ပိုတိုမှာပါ။
နှလုံးကျန်းမာရေး – လေ့လာချက်တွေအရ ဘီယာသောက်သုံးတာဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးနိုင်သလို သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုလည်း ထိမ်းချုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ကို ၂ ခွက်ထက် မပိုဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့။
အရိုး – ထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုပါ။ ဘီယာကို သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ မှီဝဲမယ်ဆိုရင် အရိုးကျန်းမာနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အရိုးကိုသန်မာစေသလို အရိုးသိပ်သည်းဆကိုလည်း ထိမ်းညှိပေးနိုင်တာမို့ အရိုးပွရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကို လျှော့ချပေးနိုင်တာပါ။
ကယ်လိုရီ – ဘီယာက ကယ်လိုရီနည်းတဲ့ အဖျော်ယမကာတစ်မျိုးပါ။ သူ့ချည်းသက်သက်ဆို သင်ဝိတ်မတက်နိုင်ပါဘူး။ ၁၂ အောင်စ (ခွက်ကြီးတစ်ခွက်အပြည့်) မှာ ကယ်လိုရီ ၁၂၅ သာပါဝင်ပါတယ်။ ခေါက်ဆွဲခြောက်တစ်ထုပ်ကို ကယ်လိုရီ ၅၀၀ ကျော်နေတာနဲ့ နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဘီယာသောက်သုံးသူတွေ ဗိုက်ပူပြီး ကိုယ်အလေးချိန်မြင့်တက်လာရတဲ့ အဓိက လက်သည်က အမြည်းစားတဲ့ ပမာဏကြောင့်ပါ။
ရေထက် ပိုသန့်တယ် – သင်သိပါသလား၊ ဘီယာဟာ ရေထက်ပိုပြီး သန့်စင်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရေအရင်းအမြစ်ကြွယ်ဝမှုနဲ့ ရေရရှိမှုနှုန်းမတူညီတာကြောင့် ရေသန့်စင်မှုကလည်း အရည်အသွေးအမျိုးမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တိုင်းပြည်မှာမဆို ဘီယာဟာ သန့်စင်မှုကွာလတီတစ်မျိုးတည်းဆိုတာကတော့ သေချာပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က တစ်ချို့ ဒေသတွေမှာဆိုရင် ရေထက် ဘီယာက ပိုစိတ်ချရတယ်လို့တောင် ထောက်ခံချက်ပေးထားတာမျိုးရှိပါတယ်။
ကဲ ဒီ Sunday မှာ ဘာသောက်ကြမလဲ ဘော်ဒါတို့
ဘီယာရဲ့ အားသာချက်နဲ့ ကော်ဖီရဲ့ အားသာချက်တွေကိုတော့ ချပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဘော်ဒါတို့ရော ဘာသောက်ချင်စိတ်ဖြစ်မိလဲဗျ။ စိတ်ထဲ ပေါ်လာတဲ့ သောက်ချင်စရာ တစ်ခုခုကို ပြောပြခဲ့ပေးပါဦး …
#KhaYeePhawFM #Coffee #Beer
Beer, Coffee, Lifestyle
Post Match – အရေးကြီးတဲ့ ၃ မှတ်ကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်